कतारमा नेपालीको मनोरञ्जनको माध्यम
"मायाको भुल भुलैया रच्यौ तिमीले कस्तो, हराउदा पनि लाग्छ हराई रहुँ जस्तो ।"
कतार यतिबेला संगितमय भएको छ । लाग्छ नेपालीहरु संगितमा धेरै हराउँदै छन र हराईरहन चाहन्छन । यहाँ नेपालीहरुको हुल देख्नसाथ आज सांगितिक कार्यक्रम हुँदै छ भन्दा कुनै फरक पर्दैन होला । फरक फरक प्रकृतिकका मानिसलाई फरक फरक किसिमका संगित मन पर्छ । प्रवासमा हप्ते थकान मेट्ने राम्रो माध्यम बनेका छन सांगीतिक कार
श्रम ऐन २०४८ लागु गर्ने क्रममा थुप्रै मुद्धाहरु श्रम कार्यालयहरुल
'रक्तदान होइन, हामीले खोजेको विदेशमा बगेको रगतको न्याय हो'
आज १५ औं अन्तराष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवस । आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले राष्ट्र संघले १९९० डिसेम्बर १८ मा महासन्धी पारित गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै ४ डिसेम्बर २००० को महासभाले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो ।
महासन्धीमा आप्रवासी कामदार अधिकारलाई मानवअधिकारकै रुपमा लिन, कुनै प्रकारको विभेद नगरी सम्मानपुर्वक व्यवहार गर्न, उत्पत्ति, बाटोमा पर्ने रा
कतारका सामाजिक संस्थाः रहर की आवश्यकता ?
खगेन्द्र कार्की, कतार - नेपालीका लागि कतार रोजगारीको दोश्रो प्राथमिकताको गन्तव्य स्थल बनिरहँदा यहाँ पाँचलाख बढी नेपालीको जमघट भईसकेको छ । कतारको यो नेपाली समाजभित्र रहेका समुदायको हितका निम्ति खोलिएका सामाजिक संस्थाहरु ठूला र साना गरी लगभग एकसय भन्दा धेरै छन् ।
ति सबै संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य एउटै रहेको छ– नेपालबाट कतारमा आएर रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरुको उद्दार गर्नु, समृद्ध बनाउनु, सचेत गराउनु,
सडक दुर्घटना, कसरी कम गर्ने ?
अजय कुमार राई, नेपालमा हालसम्म सडक यातायातको बलियो विकल्प देखिएको छैन । नेपाली जनताले सरल तथा सुलभ ढंगबाट प्रयोग गर्नु पर्ने एकमात्र यातायातको साधनमा सडक यातायात रहिआएको कसैमा छिपेको छैन । यसलाई कसले र कसरी व्यवस्थीत गर्ने भन्ने गम्भिर बहस अव चल्नु पर्ने देखिएको छ ।
सबैले प्रयोग पनि गर्नु नै पर्ने र यसलाई हेयको दृष्टीकोणबाट हालसम्म हेरिनु कुनै हालतमा न्यायसंगत मान्न सकिन्न । नेपालीले मात्र अरबौ र
प्रवासमा साझा बन्दै, नेपालमा भने त्रिपक्षीय द्वन्द
खगेन्द्र कार्की, कतार । प्रवासमा नेपाली संस्कार संस्कृतिको जगेर्नाका निम्ति हरेक तह र तप्काबाट योगदान हुने गरेको छ । विभिन्न जात जाति, धर्म र सम्प्रदायका मानिसहरुको जमघटको थलो प्रवास (कतार)मा पनि विभिन्न जातजाति, धर्म र समुदायले मान्दै आएका पर्वहरुलाई साझा बनाउने अभियानमा नेपाली समुदाय जुटेको देखिन्छ ।
हिजोका दिनमा हिन्दु, मुस्लिम, बुद्धिष्ट, क्रिस्चियन भन्ने गरिएका चाडपर्वहरु यतिखेर सबैका साझा बन
इजरायल- कृषि उद्यमी युवाको आकर्षक गन्तव्य
[caption id="attachment_3149" align="alignleft" width="173"] झलेन्द्र भट्टराई[/caption]
साना किसान कृषि प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम खास गरेर १२ कक्षा पास गरेका नेपाली बिद्यार्थीहरु जो साना किसान परिवारका सदस्य हुन्, साना किसान सहकारी संस्थामा आबद्ध छन्, उनीहरुका परिवारका मानिसहरु कृषिमैं निर्भर छन्, बर्षौदेखि उनीहरु कृषि पेशा अपनाएर आएका छन् ति परिवारका युवालाई कृषिप्रती आकर्षित गर्नका लागि ल्याईएको क
मेरो दशैको यात्रा र नेपालको प्रशाशन
मैले दिल्लीबाट दशै मनाउन घर जानको लागि यात्रा सुरु गरे । भारतको यात्रा त राम्रै भयो । तर बुटवल पुगिसकेपछी भने गाउ जानुपर्ने भएकोले म गाडीको बारेमा बुझ्नको लागी चिनेको एउटा होटेलमा गयँ । अनि त्यहाँबाट अर्कोदिन बिहान साढेआठमा जीप जाने जानकारी पायँ । जीप पनि नयाँ र पहिलो पटक जान लागेको जानकारी पायँ । शिटपनी त्यहीबाट बुक हुने थाहा पायँ र रोकदिन भनेर त्यहाँबाट म लागे। मलाई अघिल्लो दिन भनेअनुसार म सबाआठ
के हंगकंगबाट भुटानबाट झैं खेदिन सक्छन् नेपाली ?
कतारको हिरासतमा ९ दिन बिताउँदा
युएईमा नेपाली संघ संस्था र आवश्यकता
नत्र सयपत्रीको मन रुन्छ, मखमलीको आँसु चुहिन्छ
“सायद मेरो कर्ममै दुःख लेख्या रै’छ”